थाहा पाइराखौ यी ६ कुराहरु तपाईसंग छ भने सम्झनुहोस तपाई भाग्यमानी हुनुन्छ ! —
थाहा पाइराखौ यी ६ कुराहरु तपाईसंग छ भने सम्झनुहोस तपाई भाग्यमानी हुनुन्छ !
थाहा पाइराखौ यी ६ कुराहरु तपाईसंग छ भने सम्झनुहोस तपाई भाग्यमानी हुनुन्छ ! के तपाई सास्त्रमा बिस्वास गर्नुहुन्छ यदी ज्योतिष शास्त्र मा बिस्वास गर्नुहुन्छ भने मानिस सुखी भाग्यमानी हुनको लागि केहि ६ कुराहरु लेखिएको छ ति ६ कुराहरु तपाई संग छन भने सम्झिदा हुन्छ मा भाग्यमानि रहेछु भनेर शास्त्र मा उल्लेख गरेअनुसार ति ६ कुराहरु निम्न अनुसार छन् !
यी ६ कुराहरु तपाईसंग छ भने सम्झनुहोस तपाई भाग्यमानी हुनुन्छ !
अति मिल्ने साथी संजय र गोविन्दा किन बने एकअर्काको दु’श्मन ? यस्तो छ काहानी
यी बिधार्थीको अस्ट्रेलियामा भयो बिजोग कारण भने यस्तो